အသတ်ခံရတဲ့ သရုပ်ဆောင် အောင်ရဲထွေးနဲ့ အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်ရုံးကို တွေ့ရစဉ်
Photo: Aung Ye Htwe and ACC Myanmar
ဟာသသရုပ်ဆောင် အောင်ရဲထွေး အသတ်ခံရတဲ့အမှုကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ရန်ကုန်တိုင်း ဥပဒေအရာရှိချုပ်နဲ့ တရားသူကြီး အပါအဝင် ဥပဒေအရာရှိ ခြောက်ဦးကို လာဘ်ငွေရယူမှုနဲ့ အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေး ကော်မရှင်က ဒီကနေ့ အမှုဖွင့် အရေးယူလိုက်ပါတယ်။
ဒီဥပဒေအရာရှိ ခြောက်ဦးဟာ တရားခံမိသားစုတွေဆီကနေ ကျပ်ငွေ သိန်း ၃ဝ ကနေ ၃ဝဝ ကျော်အထိ လာဘ်ငွေရယူခဲ့တယ်လို့ အဂတိလိုက်စားမှု တိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင် ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဦးကျော်စိုးက RFA ကို အတည်ပြုပြောကြားပါတယ်။
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ဥပဒေချုပ် ဦးဟန်ထူး၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ဥပဒေအရာရှိ ဦးသိန်းဇော်၊ ရန်ကုန်အရှေ့ပိုင်းခရိုင် ဥပဒေအရာရှိ ဦးကိုကိုလေး၊ ဒုတိယ ခရိုင်ဥပဒေအရာရှိ ဒေါ်သစ်သစ်ခင်၊ ဒုတိယ ခရိုင်တရားသူကြီး ဦးအောင်ကြည်နဲ့ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့၊ ရွှေပေါက္ကံ နယ်မြေစခန်းမှူး (ယခင် သုဝဏ္ဏနယ်မြေစခန်းမှူး) ရဲအုပ်ချစ်ကိုကို တို့အပေါ် အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေး ဥပဒေနဲ့ အရေးယူအမှုဖွင့်လိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဟာသရုပ်ဆောင် အောင်ရဲထွေး အသတ်ခံရတဲ့အမှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး တရားခံတွေကို တရားရုံးက ကွင်းလုံးကျွတ် လွတ်ခဲ့တာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သမ္မတအပါအဝင် နိုင်ငံတော် အကြီးအကဲတွေက အခုအမှုကို ပြန်လည်စစ်ဆေးဖို့ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အောင်ရဲထွေးဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ၂ဝ၁၇ နှစ်သစ်ကူးညမှာ သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ် ပေါ်ဆန်းမွှေးလမ်းမှာရှိတဲ့The one Entertainment က ပါတီပွဲကို တက်ရောက်ရင်း လူတစ်စုက ဝိုင်းဝန်းထိုးကြိတ်တာကို ခံရပြီး သေဆုံးခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
Sep 13, 2018 11:17 PM
Well done!! Keep it up! Need to do the same with the case of Reuters Journalists.
Sep 13, 2018 03:00 PM